အမြင့်ပျံ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေနှင့် တိုက်ခန်း ဈေးကွက် | ဧရာဝတီ
ဆိုင်မွန်ရောက္ကနီး| July 15, 2013 | Hits:5,649
4 | | ချွေးပြန်အောင် ပူလောင်နေသည့် နေ့လည်ခင်းအပူရှိန်နှင့် အသက်ရှူကြပ်စရာအမှုန်တွေက ဘိလပ်မြေအိတ်တွေကို ပုခုံးမှာထမ်းကာ ငါးထပ်၊ ခြောက်ထပ်၊ ခုနစ်ထပ် အမြင့်တွေဆီတက်နေသည့် အလုပ်သမားတွေကို စိတ်အနှောက် အယှက် မပေးနိုင်ပါ။ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်စီးထားသည့် ခြေထောက်တွေနှင့် လှေခါးထစ်များကို တက်ရင်း လှုပ်ရှားမှု နှေးလာ သည့်အခါ ပါးစပ်က မာန်သွင်းအော်ဟစ်ကြသည်။ ၀န်မပါတော့ဘဲ ပေါ့ပါးစွာ ပြန်ဆင်းလာသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနှင့် လမ်းမှာ ဆုံသည့်အခါ ဘေးကိုကပ်ပေးဖို့ အော်ကြသည်။
အလားအလာကောင်းနေသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသို့ အစု အပြုံလိုက် တိုးဝှေ့ဝင်လာကြသည့်အတွက် ကိုလိုနီခေတ်ဟောင်း အဆောက်အဦများ ဖြိုချဖျက်ဆီးခံနေရသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြ၏ ဒဏ္ဍာရီသစ်တွင် ထိတ်လန့်အံ့သြဖွယ်ရာ ဈေးနှုန်းများက အစိတ်အပိုင်းတခု ခပ်မြန်မြန်ဖြစ်လာသည်။ အချို့နေရာများတွင် ရုံးခန်းငှားခ ဈေးနှုန်းသည် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီဖြစ်သည့် “ပထမကမ္ဘာနိုင်ငံ” မြို့ကြီးများမှ ဈေးနှုန်းများထက် ကျော်လွန်၍ နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထဲမှ အကြီးမားဆုံးမှာ ဗီယက်နမ် လုပ်ငန်းစု တခုမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်မည့် ရုံးခန်းများ၊ ဟိုတယ်၊ လူနေအိမ်ခန်းများနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများပါဝင်သော အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ တန် စီမံကိန်းတခု ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်ဘေးတွင်ရှိပြီး ၂၀၁၇ မတိုင်မီ ပြီးစီးရန် မလွယ်ကူပေ။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန် ပင်လယ်ရပ်ခြား ကုန်သွယ်ရေးရုံးတရုံးမှ အကြီးအကဲ Masaki Takahara က သူ၏ နိုင်ငံမှ ငွေကြေး ကြွယ်ဝသူများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေကြသော်လည်း အခြေခံအဆောက်အအုံ အားနည်းမှုများကြောင့် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီကမှ ရန်ကုန်မြို့အနီးရှိ သီလ၀ါတွင် စက်မှုဇုန်နှင့် ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရန် ဂျပန်ယန်းငွေ ၂၀ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ နီးပါး) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။
“အစပိုင်းမှာတော့ ကျနော် အံ့သြသွားပါတယ်။ မြန်မာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ရုံးချုပ်တွေက ရန်ကုန်မြို့တခြားနေရာတွေမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဟိုတယ်တွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာနဲ့ မြို့လယ်မှာ ရှာလာကြတယ်၊ ဒါမှလည်း နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင် တွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့နိုင်မယ်လေ” ဟု Marc Rudolf von Rohr ကပြောသည်။
နိုင်ငံခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမြောက်အများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွင့်အလမ်း လာရောက်ရှာဖွေကြသည့် အဆင့်မှာသာ ရှိနေသေးပြီး သူတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နေရာတွေ့လျှင် ယာယီ ငှားရမ်းနေထိုင်ကြသည်။ “သူတို့ လာတယ်၊ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်တယ်၊ လျှောက်ကြည့်တယ်၊ လုပ်ငန်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး စဖို့ မလိုသေးတာမျိုးက ရှိတတ်ပါတယ်” ဟု Marc Rudolf von Rohr ကပြောသည်။
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် နှေးကွေးသလို ဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန် မသေချာမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့်သာမက အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ရုံးခန်းနေရာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း နေရာမျိုးကိုပင် ခက်ခဲနေရခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
“အဆင်ပြေတဲ့ နေရာတခုကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ ရနိုင်ဖို့က တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူး၊ လျှပ်စစ်မီး နဲ့ အင်တာနက် မှန်မှန်ရဖို့လိုတယ်၊ ငှားရမ်းစာချုပ်ကလည်း ခိုင်မာဖို့လိုတယ်၊ အခုထိတော့ နေရာတော်တော်များများဟာ မပြည့်စုံကြ သေးဘူး” ဟု Marc Rudolf von Rohr ကပြောသည်။
“ကျနော်တို့က တလကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောက်ပဲ စပ်တူသုံးပြီးငှားမှာ၊ ကျနော့် မိန်းကလေးကတော့ နေရာတော်တော်များများ ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေက ဆောက်လို့ မပြီးသေးဘူး၊ တချို့နေရာတွေက ညစ်ပတ်တယ်၊ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းပစ္စယလည်း မစုံလင်ဘူး။ ဒါတောင်မှ သူတို့တောင်းတဲ့ဈေးတွေက ရူးချင်စရာပဲ” ဟု Jaquet က ဆိုသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သင့်တော်သည့်နေရာတခု ရခဲ့သော်လည်း Jaquet က သူတို့ စုံတွဲအတွက် ပြဿနာတွေက မဆုံးသေး ပါကြောင်း ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ဆီက တနှစ်စာအတွက် ကြိုတင်ငွေရတော့ အိမ်ရှင်ကပျော်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြင်စရာက နည်းနည်း ကျန်နေတယ်၊ အဲဒီအတွက် ရက်သတ္တပတ် နည်းနည်းလောက် ထပ်စောင့်ရမယ်တဲ့။ နောက်ဆုံး တော့ ပြင်စရာရှိတာ ကိုယ်ဖာသာပဲ ပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှ အိမ်ရှင်ဆီကို ကျသင့်ငွေ ဘောက်ချာ ပို့ပေးလိုက်တယ်လေ”
ထိုသို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ ရန်ကုန်ကိုရောက်လာကြသော နိုင်ငံခြားသား အိမ်ငှားများကြားတွင် အမြောက်အများ ရှိသည်။ Power7အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ဒေါ်မေထက်အောင်က တနှစ် အတွင်းတွင်မှာပင် အကြိမ် တော်တော်များများ တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆို၏။
ညနေစောင်းချိန်တွင် ပန်းခြံထဲတွင် ပန်းခြုံများအောက်တွင် ဟိုတစုဒီတစု ထိုင်ကာ နေ၀င်ချိန်ကို အကာအကွယ်ယူရင်း စုံတွဲများ တယောက်ကို တယောက် ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်နေကြသည်။ အုပ်ထိန်းသူများနှင့်အတူ ရောက်လာကြသည့် ကလေးငယ်များက ဟိုမှာဒီမှာ ပြေးလွှားဘောလုံး ကစားနေကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ မိခင်များ အော်ဟစ် ဆူပူခြင်းတတ်ကြ၏။ တခြားတဖက်မှာကား တကျီကျီ အော်မြည်နေသည့် ငှက်သံများကို အကာအကွယ် မပါဘဲ အလုပ်လုပ်နေသည့် အလုပ်သမားများဆီမှ ကျောက်စက်တိုက်သံများက ဖုံးလွှမ်းထား၏။ အမှောင်ဝင်လာစ ညနေခင်း တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဆီမှ ဂဟေဆော်နေသည့် မီးပန်း တွေကလည်း တဖျတ်ဖျတ် လက်နေသည်။
ထိုအချက်က ရန်ကုန်မြို့တော် ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်နေသည့် ဟန်ချက်ညီမျှမှု ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးများပြားလာခြင်းနှင့်အတူ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များကို တန်ဖိုးထားသူတို့က ရန်ကုန်မြို့ကို မူလအခြေအနေအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေခြင်းမှာ အလွန်သင့်လျော်သောအချက်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
(Simon Roughneen ၏ Property boom fuels Yangon’s skyward climb ကို နိုင်မင်းသွင် ဘာသာပြန်သည်။)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment kumudra July 26, 2013 - 7:59 pm	သာမန်လူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဈေးသိပ်မများတဲ့ အိမ်တွေ မြေတွေကို ငွေလိုလို့ ပြန်ရောင်းကြတာ အခွန်ရဘို့ ကြိုးစားနေမဲ့အစား
ငွေရှင်တွေရဲ့ တန်ဘိုးကြီးအိမ်ယာ ရောင်းဝယ်မှုတွေ ဒေါ်လာပေါင်းများစွာနဲ့ ရရှိတဲ့ လစဉ်ငှါးရမ်းခတွေကို ရှာဖွေအခွန်ကောက်ဘို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ် အခွန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လုပ်ချင်ရင် လွယ်ပါတယ်
သာမန်လူတွေ တကြိမ် တခါ ရောင်းဝယ်မှု ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပမာဏ ကန့်သန့်ချက်တွေနဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင်ရင်လဲ ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေမှာပါ
ကွန်ပစ်ပြီး ငါးကြီးတွေ လွတ်နေတာဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
အိမ် ခြံ မြေ အခန်း ရောင်း ၀ယ် ငှါး လွဲပြောင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွန်အရပ်ရပ်ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး ပြည်သူအားလုံးသိအောင် ကြေငြာ ပညာပေးနိုင်ရင် အခွန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လဒ်စားမှုက ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ပြီး နိုင်ငံတော်လည်း ရသင့်တဲ့အခွန်ငွေကို မှန်ကန်စွာ ရရှိမှာပါ
ဥပမာ ……. မြန်မာသံရုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ လစဉ် ၀င်ငွေရဲ့ ၁၀% ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ အိမ် မြေ ကား ၀ယ်တဲ့အခါ ၀င်ငွေပြခွင့်မရခဲ့ပါဘူး ဒါမျိူးတွေ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ခုတော့ သံရုံးမှာ မဆောင်ရတော့ပေမဲ့ တချိန်က နစ်နာတာက နစ်နာတာပါဘဲ
အခွန်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတာလဲ မမျှတမှုတွေရှိတော့ မတန်တဆ မပေးနိုင်လို့ ရှောင်ကြတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်
မျှတသင့်တော်ရင် ဘယ်သူမှ ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ပြီး မလုပ်ချင်ကြပါ
ဟိုတယ် ဖွင့်မည့် အဆောက်အအုံများကို ရှေးမူမပျက်အောင် စစ်ဆေးရေး လုပ်သွားမည်